Jaona | Madagascar features website
Ny nahazoan’i JESOSY ny mpianany voalohany.
35 Nony ampitson’iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy;
36 ary nijery an’i JESOSY nitsangantsangana izy ka nanao hoe: Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra!
Ny nanambaran’i Jaona Mpanao-batisa an’i JESOSY.
19 Ary izao no nambaran’i Jaona, raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany aminy mba hanontany azy hoe: Iza moa hianao?